Thintela iVenkile ye App ngo "Yongeza kwiScreen seKhaya" | Martech Zone
Phepha iVenkile ye App ngo “Yongeza kwiScreen seKhaya”
NgoLwesihlanu, Julayi 22, 2011 NgoMgqibelo, uJanuwari 23, 2021 UNick Carter
Ndiyazi ukuba ndiza kuyifumana le nto, kodwa andinguye umlandeli weMac. Kulungile, ndicacile ukuba andinakuma. Andikwazi ukubeka umnwe wam ekubeni kutheni, kodwa nasi isiqalo: ukuze uphuhlise iApp ye-iPhone ethandekayo, kufuneka uphuhlise kuphela kwi-Mac ene-software ye-Mac- utyalomali ngaphezulu kwe- $ 2,000.
Nangona kunjalo, i-iPhone iyatshintsha kwintengiso kunye nendawo yokuthengisa apho amashishini kufuneka abonelele khona.
Ke, ufuna izibonelelo zokufikelela okufana nokusetyenziswa kweApp, kodwa awufuni ndleko (okanye ukunyanzelwa kokufudukela kwiqonga leMac), okanye awufuni ukufunda ulwimi olutsha lwekhowudi.
Usebenze kakuhle kwinkqubo yesicelo sewebhu, ukonwabele zonke izibonelelo zokubamba ilifu, kungoko kutheni usakha isicelo somthengi ngoku? Ngokukodwa ukuba awunomdla ikakhulu ekuvezweni kweVenkile yeApple- abantu bayakufumana isicelo sakho ngeenzame zakho zokuthengisa, ufuna nje ukubanika itephu enye yokuziphatha kokufikelela ngokukhawuleza. Udinga i-pseudo-app.
Yongeza kwi-Screen Home
Iindaba ezimnandi. Iifowuni zinezakhiwo ezakhelweyo ngaphakathi ukuxhasa olo hlobo lomsebenzi. Akukho Mac ifunekayo. Akukho nkqubo yesibini efunekayo kwisicelo secala lomxhasi. Into oyifunayo yile:
Iwebsite eyilelwe okanye ephendulayo kububanzi obuyi-320px.
le ikhowudi snippet kunye nemifanekiso
An i-apple-touch icon (png)
Kuqala, yintoni le khowudi eyenzayo kwinqununu?
Ikhowudi kwifayile evaliweyo apha ngasentla yenzelwe kuyalela umsebenzisi kumanyathelo afanelekileyo ekufuneka bewathathe, ngokufundisa ngokufanelekileyo imisebenzi yemveli ye-iPhone esele ikhona kubo eyenza iphepha lakho lewebhu lifikeleleke njengayo nayiphi na iApp. Okwesibini, inamanyathelo akhelwe ngaphakathi ukuze oku kuboniswe kuphela kwii-iPhones kwaye ivumele umsebenzisi ukuba avale ukukhawuleza, angaze aphinde ayibone kangangexesha leenyanga ezi-6, apho baya kuthi bakhunjuzwe kwakhona.
Ngoku, kwicandelo le-geeky: ndiyifaka njani?
Gcina eyakho i-apple-touch-icon.png ifayile kulawulo lweengcambu lwewebhusayithi yakho kwaye uyiqwalasele ngokufanelekileyo> ikhonkco> ithegi entlokweni.
Beka imifanekiso efumaneka kwifayile ye-zip (ngasentla) kulawulo lwemifanekiso / imifanekiso /
Cola ikhowudi kwifayile yokubhaliweyo efumaneka kwifayile ye-zip (ngasentla) ngaphambi nje kwethegi yomzimba wokuvala kwiphepha lakho lewebhu
Yiyo leyo. Ukuba ulandela la manyathelo, kuya kufuneka ubone i-prompt kwi-iPhone yakho ekhomba umsebenzisi kwi-icon emfutshane kwisikhangeli sabo se-Safari kwaye ubayalele ukuba Yongeza kwi-Screen Home ukufikelela kwimpompo enye kuzo zonke ezinye iiapps zabo.
Ngoku, isicelo sakho sewebhu siya kuphawulwa ngencwadi kwiscreen se-iPhone. Ngokwembonakalo kunye nokufikelela ngokulula, inazo zonke izibonelelo ze-App yemveli ngaphandle kweendleko okanye ubunzima.
tags: Isicelo sokuqeshwaUmxholo wemfundoEpicorimeyile esekwe kwimvumeicebo
UNick Carter ngokwenene ungusomashishini entliziyweni. Ngumbhali we Awuxhaswa ngemaliKunye nomsunguli weDilesiTwo, a Shishini Software ye CRM ebonelela ngoosomashishini ngezixhobo kunye neenkqubo zokulawula ukuthengisa kwabo kunye nokuzenzela kwintengiso yabo.
"Yeyiphi" esebenza ngokuBalaseleyo ukuVala iiNkokeli?
Ividiyo: Itekhnoloji ye-imeyile kunye nokukhula
Jul 22, 2011 ngo-5: 05 PM
Iposti enkulu. Nantsi into esiyenzileyo http://maps.wbu.com -Uya kufumana iindawo ezimbalwa apho ezokuphelisa idilesi yedilesi kunye nemicimbi yokuskrola ngokupapasha ezi! Ndiyavuma ukuba esi sisisombululo esingcono kunokusebenza kwiVenkile ye App. Kwaye… ekubeni kukho izixhobo ezininzi kwindawo yesehlo, ukubhala usetyenziso kwi-intanethi kulula ukuluhambisa kwamanye amaqonga.